राती श्रीमानसंग विवाद, विहान पोखरीमा फेला पर्यो आमा र ४ वर्षका छोराको शब September 20, 2021 Mahesh – Motivate Me
राती श्रीमानसंग विवाद, विहान पोखरीमा फेला पर्यो आमा र ४ वर्षका छोराको शब September 20, 2021 Mahesh
राती श्रीमानसंग विवाद, विहान पोखरीमा फेला पर्यो आमा र ४ वर्षका छोराको शबराती श्रीमानसंग विवाद, विहान पोखरीमा फेला पर्यो आमा र ४ वर्षका छोराको शब September 20, 2021 Maheshकाठमाडौ । राती श्रीमानसंग विवाद परेपछि छोरा लिएर घर वाहिर निस्केकी एक महिलाको आमा छोराकै शव फेला परेको छ । धनुषामा आमा र उनका ४ वर्षका छोराको शव फेला परेको हो । सोमबार विहान धनुषाधाम नगरपालिका २ धर्मपुरस्थित पोखरीवाट प्रहरीले आमा छोराको शव बाहिर निकालेको छ । महिला अघिल्लो राती श्रीमानसंग विवाद भएपछि घर वाहिर निस्केको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
अशोक सिंहकी श्रीमती अर्चना सिंह र उनका चार वर्षीय छोरा कुशकुमार सिंहको शव घर नजिकैको पोखरीमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधामका प्रहरी निरीक्षक सुरेश ठाकुरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रहरीले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा पोखरीबाट शव बाहिर निकालेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । शवलाई पोस्ट मार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । स्थानीयले घटना
अचानक के भयो ? प्रधानमन्त्रीको निधन, थप विवरण आउन बाँकी ! काठमाडौं–बहराइनका प्रधानमन्त्री खलिफा बिन सलमान अल खलिफाको नि’धन भएकोछ। बहराइनी सरकारको आधिकारिक ट्विटरमार्फत् उनको नि’धन भएको घोषणा गरिएको हो।उनको नि’धनका विषयमा थप विवरण आउनबाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***